प्रधानमन्त्रीकै स्वास्थ्यबारे जनता बेखबर - समसामयिक - नेपाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । फाइल तस्बिरः रवि मानन्धर ।
‘प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी पाउने सबैको अधिकार हुन्छ । कम्तीमा यस्ता हेल्थ बुलेटिन अस्पताल भर्ना हुँदा र चेकजाँचको क्रममा जारी हुनुपर्छ,’ पत्रकार टपेन्द्र कार्कीको यो ट्वीटलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले पनि रिट्वीट गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी राख्न पाउने सबैको अधिकार हुन्छ । कम्तीमा यस्ता हेल्थ बुलेटिन अस्पताल भर्ना हुँदा र चेकजाँचको क्रममा जारी हुनुपर्छ । pic.twitter.com/S2O7NciBlR
— Tapendra Karki (@tapendrakarki) October 30, 2019
कार्कीको ट्वीटमा प्रधानमन्त्री उपचाररत ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति पनि छ । अस्पतालले ‘नियमित उपचार तथा स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा’ अस्पताल भर्ना भएका प्रम ओलीको ‘स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको’ उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बुधबार राती वा बिहीबारसम्म प्रधानमन्त्रीलाई डिस्चार्ज गरिने पनि वक्तव्यमा भनिएको छ । अस्पतालले बिहीबार निकालेको विज्ञप्तिमा पनि ओली बिहीबार नै डिस्चार्ज हुने भनिएको छ ।
‘स्वास्थ्य स्थिति सामान्य’ रहेको भनिए पनि प्रधानमन्त्रीको बुधबारदेखि नै अति सघन कक्ष (आईसीयु) मा राखेर उपचार भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली कात्तिक १३ गते बुधबार बिहान ९ बजेदेखि अस्पतालमा छन् ।
बुधबार एक पटक र बिहीबार दुईपटक डाइलासिस गरिएको अस्पताल स्रोतले जनाए पनि सरकार, प्रमको निजी सचिवालय तथा अस्पताल कसैले पनि बिहीबार साँझसम्म यसबारे औपचारिक रूपमा मुख खोलेनन् ।
तर ओलीलाई भेट्न बिहीबार दिउँसो अस्पताल पुगेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीको बुधबार र बिहीबार गरी दुईपटक डाइलासिस भएको पत्रकारलाई सुनाएपछि बल्ल अस्पतालले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो । र, भन्यो– ओलीको डाइलासिस भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न गएका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पत्रकारसँग भने - डाक्टरका अनुसार अर्को डायलासिस गर्नुपर्ने हुन पनि सक्छ, तर अहिले अवस्था सामान्य छ । pic.twitter.com/LWvB8z3F2S
— Kantipur TV HD (@ourktv) October 31, 2019
ग्रान्डी अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा चक्रराज पाण्डेले लिखित विज्ञप्ति पढेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको ‘हेमोडाइलासिस भएको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसले के देखाएको छ भने प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे उनको निजी सचिवालय प्रस्ट जानकारी दिन चाहँदैन । नभए मुलुकको प्रधानमन्त्री बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुँदा पनि किन उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे नागरिकलाई बेलामा जानकारी दिन आवश्यक ठानिएको छैन ?
१२ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएको यो पहिलोपटक होइन । देशमा मात्र नभएर उनले विदेशमा समेत उपचार तथा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका छन् । तर कुनै पनि समयमा उनको स्वास्थ्यबारे प्रस्ट जानकारी दिने गरिएको छैन ।
पछिल्लोपटक एक साताको फरकमा ओली दुईपटक सिंगापुर पुगेका थिए, उपचारका लागि । साउन १८ देखि २७ र भदौ ५ देखि १९ गरी त्यहाँ ओलीको ‘प्लाज्मा फेरेसिस’ गरिएको थियो । एक साता नबित्दै ओली पुन: उपचारका लागि सिंगापुर जाने चर्चाबीच प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे देशवासीलाई थाहा नदिइएको भन्दै सोसल मिडियामा चर्को आलोचना भएपछि गत भदौ ५ गते ओली सिंगापुर जानुअघि निजी चिकित्सक प्राडा दिव्यासिंह शाहले विज्ञप्ति जारी गरेकी थिइन् । त्यसअघि ओली साउन १८ गतेदेखि २७ गतेसम्म सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा उपचार गराएर फर्किएका थिए ।
उक्त उपचारमा ‘मिर्गौलासम्बन्धी एन्टीबडीको मात्रा बढी देखिएको’ र ‘एन्टीबडीलाई शरीरबाट निस्काशन गरी निराकरण गर्ने उपचार विधिलाई निरन्तरता दिन सिंगापुर जान लागेको’ प्रधानमन्त्री ओलीका निजी चिकित्सक शाहको भनाइ थियो । १४ दिनको उपचारपछि प्रधानमन्त्री ओली भदौ १९ गते स्वदेश फर्किएका थिए ।
अहिले ओलीलाई भएको के हो ? ओलीको मिर्गौलामा देखिएको समस्या के हो ? ओलीका निजी चिकित्सकसमेत रहेकी ग्रान्डी अस्पतालकी मिर्गौला विभाग प्रमुख प्राडा दिव्यासिंह शाह र अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा चक्रराज पाण्डेले बिहीबार निकालेको विज्ञप्तिमा ओलीलाई ‘हेमोडाइलासिस गरिएको’ भनिएको छ ।
‘हेमोडाइलासिस’ लाई नै बोलीचालीमा डाइलासिस भनिन्छ । पाण्डेकै भनाइमा ‘हेमोडाइलासिस’ भनेको ‘रगतमा भएको क्र्याटनिनलाई क्लियर गर्ने सिस्टम’ हो ।
वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा राजेन्द्रकुमार अग्रवालका अनुसार शरीरमा हुने दूषित पदार्थलाई क्र्याटनिन भनिन्छ । “मिर्गौलाले क्र्याटनिन छानेर शरीरका अरु भागमा रक्तसञ्चार गराउँछ,” उनी भन्छन्, “डाइलासिस गर्नुको अर्थ हो, मिर्गौला फेल भएको छ, ठीक ढंगले काम गर्न छाडेको छ ।”
अग्रवालका अनुसार मिर्गौलाले काम गर्न छोड्नुका पनि विभिन्न चरण हुन्छन् । “जस्तो हामी क्रोनिक र एक्युट भन्छौँ,” उनी भन्छन्, “क्रोनिक भएमा हप्तामा दुई पटक डाइलासिस गर्नैपर्छ । यदि एक्युट भएमा मिर्गौला पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि डाइलासिस बन्द गर्न सकिन्छ ।”
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे नागरिकलाई सही ढंगले जानकारी गराउन भने असफल देखिएको छ । बरु सचिवालयका जिम्मेवार अधिकारी सोसल मिडियामा आफूअनुकूल हुने जानकारी वा लिंक सेयर गरिरहेका देखिन्छन् ।
— Bishnu Rimal (@BishnuRimal) October 31, 2019
प्रधानमन्त्री ओलीकै आधिकारिक ट्वीटर र निजी ट्वीटर एकाउन्ट पनि स्वास्थ्य अवस्थाबारे मौन छन् । यी दुवै एकाउन्टबाट बिहीबार ४ बजेर ४० मिनेटमा एउटै ट्वीट गरिएको छ । ७ महिनामा ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमाल चढेर नयाँ कीर्तिमान बनाएका निर्मल पुर्जालाई प्रधानमन्त्रीले बधाई दिएका छन् ।
सात महिनामा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ वटै हिमशिखर आरोहण गरी नयाँ कीर्तिमान कायम गर्नु भएकोमा निर्मल पुर्जालाई हार्दिक वधाई ज्ञापन गर्दछु । यस सफलता मार्फत नेपाली जातिको कठोर मेहेनतलाई पनि उजागर गर्नु भएकामा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
— K P Sharma Oli (@kpsharmaoli) October 31, 2019
तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल सूचना लुकाएको स्वीकार्दैनन् । “एउटा बिरामीबारेजे चासो छ, त्यसको जवाफ दिने हो । सबै मेडिकल रिपोर्ट वा तथ्यांक मिडियामा सार्वजनिक गर्ने कुरा होइन,” अर्यालको तर्क छ, “कतिपय मेडिकल कन्डिसन हुन्छन्, जसका बारे चिकित्सक वा अस्पतालले मात्र भन्न सक्छ ।”
बिहीबारमात्र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा उनी हँसिला देखिएको जानकारी दिँदै अर्यालले भने,“उहाँको बारेमा सबैलाई चासो छ । उहाँ सामान्य हुनुहुन्छ । सबै मेडिकल डेटा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।”
यो पनि पढ्नुस्ः प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा राजनीति
ट्याग: प्रधानमन्त्रीकेपी शर्मा ओलीग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलमिर्गौला